कोरियाली माटो विज्ञसँग संघले छलफल गर्यो । कार्तिक ९ | Makwanpur Chamber of Commerce & Industry (MCCI)
हेटौंडा । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा दक्षिण कोरियाका माटो विज्ञ लि बोङ्ग शूसँग व्यवसायिक कृषिको विषयमा छलफल गरेकोछ । दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपतिका कृषि सल्लाहकार समेत रहेका शू किम्हे माईग्रेन्ट हाउस, एशियन फोरम काठमाडौं, सपोर्ट नेपाल फाउण्डेशन, द. कोरियाको संयुक्त पहल तथा संघको निमन्त्रणामा उनी मकवानपुर आएका हुन् । कार्यक्रममा शूले आज भन्दा ४ दशक अघिसम्म समेत आफ्नो देश रिबीकै रेमुन रहेका स्रण गर्नुहुदै देशका नागरिकमा विकासको इच्छा शक्ति भएमा विकासमा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख निर्मल गदाल तथा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. रामप्रकाश प्रधान तथा क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशालाका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश प्रसाद साहले आ–आफ्नो प्रस्तुति समेत दिनु भएको थियो ।